Ahoana ny fomba handresena fitiavana tsy voavaly ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ahoana ny fomba handresena ny fitiavana tsy misy valiny. Raha manana fitiavana tsy misy valiny ianao dia afaka mahita fampiononana sy fanantenana ao amin'i Jesosy. Andriamanitra dia manana drafitra mety aminao. Angamba tsy anisan'ny drafitra io olona tianao io, nefa tsy izany no farany.
Misy karazana fitiavana tsy misy valiny: eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny anadahy, ny mpivady, ary koa ny fitiavana am-pitiavana. Fantatr’Andriamanitra ny fanaintainan’ny fitiavana tsy misy valiny. Tiany ny olona tsirairay miaraka aminy infinito fitiavana, fa maro ny olona mandà ny fitiavany. Amin'ny faritra maro ao amin'ny Baiboly, Andriamanitra dia ampitahaina amin'ny lehilahy izay nolavin'ny vadiny, na dia efa nomeny azy aza ny fitiavany rehetra. Na izany aza, tsy kivy Andriamanitra manolotra ny fitiavany antsika.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fitiavana romantika tsy voavaly eo amin'ny samy mpitovo. Matetika ny mitia olona tsy dia mitovy aminao ny fahitanao azy. Tsy mifankatia ny fitiavana, ka tsy afaka hanana fifandraisana.
1 Ahoana no hialana amin'ny fitiavana tsy voavaly: toro-hevitra
1.1 1. Mialà kely
1.2 2. Mitadiava tanjaka amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra
1.3 3. Mitandrema amin'ny fanapahan-kevitra lehibe dieny izao
2 Ahoana raha misy tia anao, nefa tsy mitovy ny zavatra tsapanao?
Ahoana no hialana amin'ny fitiavana tsy voavaly: toro-hevitra
Rehefa hitanao fa tsy misy valiny ny fitiavanao dia ny dingana voalohany dia ekeo izany zava-misy izany. Tsy azonao atao ny mampitia anao. Na Andriamanitra aza tsy manao an'izany! Ny fitiavanao ihany no azonao atolotra ary miandry ny hafa hamaly. Raha tsy izany dia tsy maintsy atao hajao ny fanapahan-kevitr'io olona io.
Aza miezaka ny hanana fanantenana. Tsy midika akory izany hoe tsia. Raha nilaza mazava ilay olona tianao dia tsy te hifandray aminao izy ireo, aza manenjika azy intsony. Hanimba anao fotsiny izany. Tsy mandeha ny fifandraisana raha tsy eo ianareo roa. Tsy maintsy manomboka mandroso amin'ny fiainanao ianao. Ary ny dingana voalohany dia ny manaiky.
Afaka mandeha miaraka ve ny roa, raha tsy efa nifanarahana?
1. Mialà kely
Milaza izany ny Baiboly manam-paharetana, tsara fanahy ny fitiavana ary tsy mitady izay hahasoa ny tenany. Rehefa tsy voavaly ny fitiavanao, ny zavatra tsara indrindra azonao atao ho an'io olona io dia ny manaja ny fanapahan-keviny ary manalavitra ny henatra. Aza tia tena, tazomy ny halaviranao.
Ny fitiavana mahari-po, manasoa; ny fitiavana tsy mialona, ​​ny fitiavana tsy mirehareha, tsy mieboebo izy;
tsy manao izay tsy mety izy, tsy mitady ny azy, tsy sosotra, tsy mitana lolompo.
1 Korintiana 13: 4-5
Ny fahitanao fa tsy voavaly ny fitiavanao, dia maharary, mila fotoana hisitranana ny fonao. Ny fanakaikezana ny tanjon'ny fitiavanao dia manasarotra ny fizotrany ihany. Tsy mila manapaka ny fifandraisana rehetra ianao, fa aza manakaiky an'ity olona ity. indrindra amin'ny voalohany.
2. Mitadiava tanjaka amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra
Mitadiava hery eo amin’ny fifandraisanao amin’Andriamanitra
Mety ho be fitiavana ianao ary tsy hisy olon-kafa hamita ny fiainanao. Na izany aza, ny fifandraisana manan-danja indrindra anananao dia amin'i Jesosy. Fotoana toy izao no ilanao indrindra an'i Jesosy, hampiononana anao sy hanomezana tanjona ny fiainanao.
Ao amin'i Jesosy, ny fitiavanao dia mihoatra noho ny valim-pitia! Izy no tsy handiso fanantenana anao. Amin'ny fotoana rehetra, Eo foana Jesosy ary manana hery hanampy anao handresy ny fanaintainan'ny fitiavana tsy misy valiny.
Fantatr'Andriamanitra izay mahasoa anao indrindra. Raha tsy voavaly ny fitiavanao dia manana drafitra hafa ho an'ny fiainanao Andriamanitra.. Mivavaha mba ho tanteraka eo amin’ny fiainanao ny sitrapon’Andriamanitra, ka manaiky ny sitrapony.
Sambatra ny mpampihavana; fa izy no hatao hoe zanak'Andriamanitra.
Sambatra izay enjehina noho ny ny rariny, fa azy ny fanjakan'ny lanitra.
Matio 5: 9-10
3. Mitandrema amin'ny fanapahan-kevitra lehibe dieny izao
Mitandrema amin'ny fanapahan-kevitra lehibe dieny izao
Rehefa sendra olana lehibe ianao, toy ny hoe tsy voavaly ny fitiavanao, dia mety hipoitra ny fakam-panahy hanao zavatra hadalana. Zavatra sasany izay NO Ny zavatra tokony hatao hiatrehana ny fanaintainan'ny fo torotoro dia:
Manokana ny tenanao aminny enjeho ny fitiavanao tsy misy valiny.
Manokana ny tenanao aminny ovay fankahalana ny fitiavanao.
Mitady fiononana amin'ny alikaola na zava-mahadomelina.
Mampiaraka na manambady olona tsy ho ela, Mba tsy ho irery.
Afoy ny zava-drehetra amin'ny fiainana.
Avelao ny zava-drehetra hanova tanteraka ny fiainanao
Amin'ny fanaintainan'ny firehetam-po dia tsy mandeha ny sainao. Noho izany, tsy hevitra tsara ny fandraisana fanapahan-kevitra ifotony izany dia hisy fiantraikany amin'ny andro sisa iainanao amin'izany fotoana izany. Andraso mandra-pitonianao. Amin'ny fanapahan-kevitra lehibe, aza maika.
Ny fisainan'ny mazoto dia manan-karena;
Fa izay rehetra mirotoroto adala dia azo antoka fa ho any amin'ny fahantrana.
Ohabolana 21: 5
Ahoana raha misy tia anao, nefa tsy mitovy ny zavatra tsapanao?
Tsy mila mahatsapa toy izany amin'ny olon-kafa ianao. Tsara kokoa manao ny marina noho ny manery ny tenanao hahatsapa izany. Ny fifandraisana tsy misy fahatsoram-po dia maty alohan'ny hanombohany. Raha mahatsapa ianao fa izany dia fifandraisana tsy tianao hananana dia ataovy mazava amin'ny olona iray hafa ny fahatsapanao. Ity no fanapahan-kevitrao ary tsy misy olona manan-jo hanery anao hanana fifandraisana amin'ny olona tsy tianao.
Manantena izahay fa ity lahatsoratra ity dia manampy anao hahatakatra ny fomba hialana amin'ny fitiavana tsy misy valiny. Raha te hahalala ianao ny fomba hamantarana ny fifandraisana feno herisetra ary ny fomba fihetsika araka ny Baiboly, tohizo ny fitetezana Discover.online.
Inona no tanjon'ny fiainana araka ny Baiboly